Nezvedu - HupenyuBogger (Nhau dzeBhora dzeVechidiki uye Biography Chokwadi)
Welcome to LifeBogger! Imba yeChokwadi Nhau dzeNhau.
Vatambi venhabvu, vatambi venhabvu uye elites vese vane Nhau dzeChidiki uye Biography Chokwadi. LifeBogger inobata idzi nguva dzisingakanganwiki dzinonakidza uye kubata.
Yedu platform inopa zvakanyanya kubata, zvinokatyamadza uye zvinonakidza zveVechidiki Nhau uye Biography Chokwadi chevatambi venhabvu (vanoshanda / vairi pamudyandigere), vatariri venhabvu nevakuru. Isu tinofukidza zviitiko zvakakosha kubva panguva dzehudiki hwavo kusvika pavakazozivikanwa.
Zvinoshamisa kuona kuti vafambisi vebhola, mamaneja uye elites vanokura kubva kuvana vakanaka kusvika kune nyanzvi. Chinangwa chedu ndechekutarisa nezvakaitika muhupenyu hwevanhu ava, chimwe chinoiswa mune kwavo kuziva shure.
Basa Redu: Kuti uve pakati peYakanakisisa Dhijitari reDzinotsigira Vanotamba Nhau dzeVechidiki uye Biography Chokwadi.
LifeBogger inoshandira kuva pakati pe "Iyo Yakanyanya" online bhora yenhabvu yenhau dzehudiki uye Untold Biography Chokwadi chevatambi venhabvu (vese vanoshanda uye vari pamudyandigere), mamaneja nevatambi venhabvu.
Mukuita izvo, isu shuwa tinopa vaverengi vedu vanoremekedzwa iwo marimu ekupedzisira ezvinyorwa (kukosha kwepamusoro) izvo zvinoita kuti vadzoke kuzowona zvimwe.
Zvinyorwa zvedu zvine kuongororwa kuzere kweavo vanofarira nhabvu / mamaneja / elite ekutanga hupenyu, nhoroondo yemhuri, hupenyu hwepakutanga kwehupenyu, mugwagwa / kusimuka kune mukurumbira biography chokwadi, hupenyu hwemhuri, hupenyu hwehukama, hupenyu hwepamoyo, mararamiro uye chokwadi chisina kutaurwa.
Chinangwa chedu: Kugadzira uye kuchengetedza dhijitari repamhepo yevateveri venhabvu.
Zvinofungidzirwa kuti vanopfuura hafu yevagari vepasi vanozvitora sevabatiri venhabvu (nhabvu) vateveri kana vateveri. Izvi zvinoreva kuti vanhu zviuru zvina zvemadhora vari kuona bhora rinove nhabvu yakakurumbira munyika.
Kunyange isu tisingagadzira nhabvu inovhuvhuta nhau kana kupa zvakapfuura mavhoti kana epamusoro gumi, chinangwa chedu ndechekuchengetedza nhabvu yeudiki mharidzo yenhau yehupenyu uye nhoroondo yehupenyu hwevanhu vese mudhi.
Nhabvu yedu yeudiki nhabvu biografia tariro yekupa vatambi venhabvu ruzivo rwakawedzera nezvevatambi vavanofarira pamazuva ese emitambo paTV. Nekudaro, hazvisi zvekungoona bhora chete asi kurirava.
Zvatinokoshesa: Hunhu hwemukati uye Passion.
Zvemukati Zvemukati: LifeBogger inoshingirira kugovera zvakanakisa izvo zvinopa kukosha kwepamusoro kune vanoda bhora pasirese.
Kushushikana: Isu tinotenda Nhabvu (Soccer) inosanganiswa nechido, manzwiro, kufara uye kuzvipira. Saka, tinounza shungu mukunyora nhabvu nyaya dzevacheche uye Untold Biography Chokwadi.
Chokwadi ndechekuti kunyora nhabvu zvemukati uye kugadzira chishuvo icho chaitidya, kuita kuti titende iri Clarion Call.